यौन हिसंामा महिला – Pramb's Weblog
डिसेम्बर 10, 2008 by PRAMB
यौन हिसंामा महिला
हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर दश सम्म सोह्र दिने ��महिला विरुद्ध यौनजन्य हिसंाÚ अभियान अन्र्तराष्टि�्रय स्तरमा मनाउने गरिन्छ । त्यसै अबसरमा थुप्रै यौनजन्य हिसंााको ’boutमा उच्चस्तरीय छलफल विभिन्न निकायबाट हुदैँ आएका छन् । यस वर्षको महिला हिसंा विरुद्धको नारा ��मानब अधिकार महिलाका लागि मानबअधिकार सबैका लािगÚ रहेको छ ।
महिला माथि हुने हिसंाको कुरा गर्दा विशेषत यौनजन्य हिसंा पर्ने गर्दछ । यौनजन्य हिसंामा महिलालाई अवािाचत छेडछाड यौन दुब्र्यवहार आफ्नै परिवेश भित्रका आफन्त वा चिनेजानेका जो कोहीले पनि गर्न सक्ने हुदाँ महिलालाई यौनजन्य हिसंाको खतरा जहीँ तहीँ हुने गर्दछ । यसले महिला माथि शारिरिक र मानसिक दुवै रुपमा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ ।
महिलाविरुद्धको हिसां कुनै पनि हिसाबले निजी मामिला होइन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । यो साँस्कृतिक तथा परम्परागत कारणहरुबाट निर्धारित छ । त्यसैले कसै गरी त्यसलाई छुट दिने वा कम्तीमा टार्न नसकिने विषय हो भनि ब्याख्या गर्न समाजका लागि महिला विरुद्ध हिसंाका कठोर प्रभाव हुन्छन् भन्ने कुरा स्वीकारिनै पर्छ । महिलविरुद्धको हिसंा र सबै प्रकारका हिसां माथि समाजले लड्नैपर्छ । जबसम्म महिलाहरुमा चेतना विकसित नभई घर बाहिरको दुनियाँ देख्न सक्दैनन् तबसम्म महिला माथि हुने घरेलु हिसंा विरुद्धका नारा उठाउनुको कुनै तुक हुँदैन ।
प्रभावकारी रुपमा त्यसो गर्न महिलाले विश्वासका साथ पहुँच प्रााप्त गर्न सक्ने चिकित्सकीय मनोसामाजिक र कानुनी सहायता जस्ता संरचनाको विकास गरिनुपर्दछ । यी संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधन सहयोगी उपलब्ध गराउन राज्य र समाजको तर्फबाट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा महिलाहरु उजुरीको लागि आएका हुन्छन् भने कतिपय भविष्यमा आइपर्ने समस्याको आकंलन गरी उजुरी गर्न डराउँछन् । त्यसै माथि पनि कतिपय अवस्थामा उजुरी गर्न गएकै ठाँउमा पनि उजुरी बुझिलिने ब्यक्ति स्वंयले ती महिलालाई छेडछाड गर्ने शब्द प्रयोग गर्ने र समस्यालाई गम्भीरता पूर्वक नलिने चलन चल्दै आएको छ । गोपनीयताको कमी हुदाँ पनि उजुरी गर्ने परिपाटी बन्न सकेको छैन । उजुरी पछि पीडित महिलाको उपचार गरेको रिर्पोट तयार गर्ने चलन चल्दै आएको भएता पनि त्यसलाई थप अनुगमनमा राखेर नियमित रुपमा उपचार गरी सामाजिक परामर्श र कानुनी सहयोगले महिला विरुद्धको हिसंामा लड्न प्रेरित गर्न सकिएको छैन ।
यौन हिसांका पीडितहरुलाई न्यायमा पहुँच माथि प्रकाश पार्न थुप्रै कार्यक्रम आयोजना गरी लैि�ङ्घक हिसंा विरुद्ध सोह्र दिने गतिविधिको वार्षिक अभियान मनाइन्छ । तर हामीले हिसंा विरुद्ध सोह्रदिने गतिविधिको स्मरण गर्दै गर्दा महिलाविरुद्धको हिसांलाई दुविधा रहित ढंगले भत्स्रना गर्न अपराधका पीडकहरुलाई जवाफदेही बनाउन तथा ब्यवहार परिवर्तनको माग गर्न चुकेका छौँ । यस्ता हिसंा भोगेका महिलालाई हृदय देखिनै सहयोगको बाचा गर्न पुरुषहरुको सहयता निकै महत्वपूर्ण हुनेगर्छ । तर धेरै अवस्थामा पीडकहरु दण्डहीनताको चुलीमा पुगी बिना प्रमाण उम्किएका छन् । दण्डहीनतालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने तर्फ चेतना अभिबृद्धि गर्दै प्रमाणहरु लोप नहोस् भन्नका लागि महिलाहरु सकेसम्म छिटो अस्पताल जान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हो । विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई अझ प्रयोगमा ल्याएर त्यसतो अपराधको प्रकृति मुल्या�ड्ढनको संयन्त्र तयार भई गोपनियताको संरक्षणको वातावरण बनाइनु पर्छ ।
पीडित हुनुमा बलात्कृत स्यंवको अपराध होइन त्यो बलत्कार सम्बन्धी अपराधलाई उपेक्षा ग�र् यो भने बलत्कारीको मात्रै नभइ समाजको नै अपराध हो । यस्ता यौनजन्य अपराध कुनै एक क्षेत्र जाति धर्म र समुदायको मात्रै समस्या नभई सम्पूर्ण समाज राष्ट�्र र मानवता विरुद्ध कै अपराध हो । यी अपराधहरु गोपनियता संग सम्बन्धित भएकोले पीडितहरुलाई अपराध र स्वसम्बद्ध उन्मुक्ति दिन र न्याय दिने दायित्व समाजका सबैको हो ।
समाजमा अपराधीहरुले कानुनले तोकेको दण्ड सजाय पाउने गरेका छैनन् । पीडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् । यो हाम्रो समाजको तितो यर्थाथ हो । यो त्यस्तो अपराध हो जसको साक्षी पीडित स्वयं हुन्छ तथापि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । उसले अपमान र नीरिहताको सामना गर्नुपर्छ । उसलाई के बाट सुरक्षित राख्नुपर्ने हो त्यसमा गम्भीर नजर अन्दाज हुनु आवश्यक छ । शक्ति संरचना भित्र पछाडि पारिएको सोच जिम्मेवार छ । बहुसंख्यक हिसंापीडितहरु पछाडी पारिएको वर्ग अन्र्तगतका छन् । किशोरावस्था देखि नै महिलाको यौनिकतालाई ढाकछोप गर्ने जुन सोच छ त्यो सोचलाई औपचारिक अनुमति उसप्रतिको ब्यवहारले दिएको छ । जस माथि आँच आउने गरी पीडकले यौनजन्य हिसंा गर्छ भने त्यसमा महिलाले उजुरी गर्न नसक्नु हाम्रो जस्तो पुरातनवादी सोच भएको मुलुकमा स्वभाविक हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि निकायमा उजुरी बुझिलिने र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तहमा महिलालाई नै प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै खुलस्त रुपमा एक हिसंा पीडित महिलाले अर्को महिलालाई आफ्नो समस्या बताउन सक्छिन् ।
आधा विश्व ओगटेका महिलाले यौनजन्य हिसंा संगसंगै आफ्नो मानवअधिकार गुमाइरहेका छन् । अरु देशमा हिसंा विरुद्ध उजुरी गर्ने समय दश वर्ष सम्म तोकिएको छ भने नेपालमा जम्मा पैँतिस दिन तोकिएको छ ।
देशको भौगोलिक आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले सबै महिला उजुरी गर्न तोकिएको समयमा उपस्थित हुन असर्मथ हुन्छन् जसले दण्डहिनताको अभ्यासलाई झन् बढावा दिने गरेको छ । त्यसैले महिलाविरुद्ध हुने हिसंाको अन्त्य गर्ने पद्दतिको निर्माणको लागि शिक्षा र जनचेतना अभिबृद्धिको खाचोँ देखिन्छ ।
विद्यमान कानूनलाई प्रभावकारी बनाउन र समय अनुसार परिमार्जन गर्ने दायित्व सरकारमा बस्नेको काँधमा आएको छ । आफ्ना अनुभव ’boutमा बोल्न र न्यायका लागि दाबी गर्न महिलाहरुलाई कदम चाल्न नदिने अबरोधहरुलाई हामी कसरी चुनौति दिन सक्छौँ र यौन हिसंाका पीडितहरुलाई कसरी राम्ररी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने ’bout छलफल हुनु अत्यन्तै अपरिहार्य देखिन्छ । विज्ञ र समाजका विद्धत्वर्गले यौन हिसांलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक बहुबिधागत पद्दतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । पीडित महिलाले भोगेका यौनजन्य हिसांलाई सम्बोधन गर्ने प्रकि्रयाको क्रममा आफैँले दाबी गर्ने र निर्णय गर्न सक्ने सशक्तिकरण हुनुपर्छ ।
This entry was posted in monologue and tagged Human Rights for Women Human Rights for all. Bookmark the permalink.
← ुअब्दुल कलामको उक्तिको मर्मु
Framing the War →